Ebee ka a na-ese ihe nkiri? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ihe nkedo nke ịhapụ - otu esi ekpebi
Ebee ka a na-ese ihe nkiri?
Kedu ka ị dị, Abụ m Kallen na nke a bụ Slapped Ham. Taa, anyị ga-enyocha ụfọdụ ndị na-ama jijiji bụ ndị eserese na-eche na ndụ dị adị. Ya mere see bọtịnụ ịdenye aha ma kwadebe maka ọdịnaya dị egwu dị ka nke a. (ominous echo echo) Isi mmalite nke onyogho a amachaghị, agbanyeghị, ọ gaghị abụ ndepụta nke ndị na-atụ ụjọ na-ese na ndụ n'ezie na-enweghị ntinye ya kpamkpam.
O doro anya na ese foto a n'abalị na bọs ebe dị na San Francisco. N'oge amata onye sere foto a amaghi, otu ihe doro anya, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-atụtụ aka igosi igwefoto gị na onye a. Anya ya na-apụ n'anya na-acha ọbara ọbara ma nwee ọnụ juputara na ezé na-acha odo odo nke yiri ka ọ ga-apụ site na ebe ọ bụla ịbụ tranceor, ụdị ọnọdụ gbanwere agbanwe, nke yiri zombie.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịdị ụwa ọzọ, ọtụtụ ndị na-ekiri ya atụnyere ya na onye omekome a na-akpọ Boris The Animal site na fim akụkọ sayensị a ma ama bụ Men in Black. Foto nke nwoke a na-atụ ụjọ pụtara na forntanetị na nke mbụ ya, ọ naghị ewe ogologo oge ghọọ onye Meme ghọrọ. Nke a dị ka ọ dị adị n'ezie, dịka ọ dị ka ndị ahịa US nwere ike ịchọ ya.
Agbanyeghị, ọ ghọrọ nke adịgboroja nke ewepụtara na mbụ Twitter post. Ọ bụ ezie na nwoke a nọ na foto a adịchaghị ize ndụ, ọ gbakwunyere ihe omimi ọzọ na njirimara nwoke ahụ. O nwekwara ike ịbụ onye omekome gbapụrụ agbapụ na gịnị kpatara o jiri dị ka ọ mere ya? Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ozi ọ bụla banyere nwoke ahụ na-ama jijiji nke na-ese foto na bọs, ọ ga-amasị anyị ịnụ banyere ya na nkọwa ndị dị n'okpuru.
E zigara clip vidiyo a na YouTube ka ọ were ọnụahịa YouTube na Machị 2013, ya na enyi ya Bryson jisiri ike wepu onyonyo gbara ọchịchịrị na-ezo n'ime ọhịa dị nso n'ụlọ ya. Ma ya kpebiri were foto ya na igwefoto ya. Nke mbụ, ụmụ nwoke ahụ kpebiri ikewa ma chọọ ebe ahụ, onye ọ bụla si gnsof ihe omimi ahụ.
O doro anya na, Bryson n'oge na-adịghị anya na-achịkwa ntakịrị ka ọ na-ejegharị nwayọ site na osisi. - Kedu ihe bụ ihe ahụ? Ga-eme. - jọ site na ihe ọ hụrụ, Bryson gbara ọsọ iji gwa enyi ya Will.
Ha abụọ na-ezute ma nyochaa ngwa ngwa ihe omimi ahụ. - Kedu ihe bụ ihe ahụ? Na July 2015, ihe karịrị afọ abụọ mgbe ụmụ nwoke ahụ zutere onye isi ojii, e debere isiokwu ọzọ na channelụ Will. Ihe onyonyo ohuru a gosiputara otu ihe ahu ma obu ihe yiri ya nke oma.
Ihe nkiri a malitere dika umuaka nwoke, ndi kariri ugbua karia ihe edere na mbu, malitere igwu egwu na nkita nke Will Ellie - N'ebe a, Ellie - Ha tufuru ochie ochie site na veranda, Ellie na-agba ngwa ngwa iji weta ya ịlaghachi n'ụlọ ikpe mgbe Ga-achọpụta ihe na mberede na ọhịa nke na-agagharị. - you hụrụ nke ahụ? - Nwanne, ị hụrụ nke ahụ? - Na mbu o siri ike ịhụ ihe ọbụla ma ọlị. Agbanyeghị, ọ bịara apụta ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ gbara ọchịchịrị na-ezobe n'ezie.
Mgbe o biliri, ọ gakwuuru ụmụ nwoke ahụ - Mba, dude, ị hụrụ nke ahụ? Oo chimoo. - Kwụsị, A ga-anụ ka ọ na-akpọ nkịta ya ka ọ bịakwute ya mgbe ụmụ nwoke ahụ laghachiri na nchekwa nke ụlọ. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, isiokwu ahụ kwụsịrị na mberede - enweghị ụzọ. - Kedu ihe bụ nke a? Ellie, Ellie, bia, bia. (ogbugbo) - Isiokwu a yiri ka ejidela otu agwa ụmụ nwoke ahụ hụrụ ka ọ na-eche ihe dị ka afọ abụọ gara aga.
Agbanyeghị, n'oge a ị ga - ahụ ya karịa. A na-eyi ya uwe ojii nile, o yikwara ka o nwere aka ogologo. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ekiri ya atụnyere agwa ahụ na Slenderman ma ọ bụ ọbụna Bigfoot, ọ dị ka ọ na-agagharị dị ka ezigbo mmadụ.
Nke a anaghị eme ka ọ ghara ịda mbà, n'ezie, dị ka onye agwa ya doro anya na o nwere ebumnuche dị njọ. Afọ abụọ gafere na Will, oge a na enyi ya aha ya bụ Westen, na-achịkwa ijide ọhụụ ọzọ nke ihe omimi gbara ọchịchịrị dị na igwefoto. Mgbe jet skiing na a ọdọ, ụmụ okorobịa na-achọpụta ihe pụrụ iche ka ha na-eru nso a osisi ọhịa (ugboelu skai engine ebigbọ) - dude ihe hell? - o siri ike ịhụ na mbụ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na i lelee anya nke ọma ị ga - ahụ ihe gbara ọchịchịrị n’etiti osisi - dude gịnị bụ ọkụ mmụọ? - O doro anya na ọ bụghị nkọ Iji lee anya nso, ụmụ okorobịa ahụ kpebiri ịga ebe a na-ahụ Oppo. - Kedu ụdị iberibe bụ nke a? (Jet ski engine roars) Gaa, gawa, gawa, gawa, laa, gaa, gawa, gawa, gawa.- Ndi a nwere ike buru onu ogugu ochichiri ndi ahuru n’isiokwu ndi mbu? Ya bụrụ otú ahụ, ònye ma ọ bụ gịnị ka i chere na ọ bụ? Somefọdụ onye ara nwere ike ibi n'oké ọhịa, ma ọ bụ ọbụna ihe karịrị ike mmadụ? Maka nwa nwoke, ka anyị nwee olile anya na ihe ọ bụla ọ bụ, ọ dịghị ihe ọjọọ dị na atụmatụ.
Foto a na-awụ akpata oyi nọ na-agagharị na ntanetị nwa oge; ekwenyere na ọ bụ onyonyo nke ihe nkiri onyonyo a ma ama na Japan a na-akpọ Psychic Japan. Ka onye ọ bụla nọ na-ele ebe ahụ, nwanyị tụgharịrị isi ya n'akụkụ ihe na-agaghị ekwe omume. Site na isi ya dị egwu na ọdịdị ya dị nro, nwanyị nke nọ na foto a na-agbaso ihe oyiyi nke Regan MacNeil, nwata nwanyị na-arịa ọrịa mmụọ ọjọọ na fim ahụ bụ Exorcist.
N'ezie, nke a dugara ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịntanetị ikwubi na nwanyị a na-agakwa ụdị ihe ahụ. Mgbe ese foto ahụ, ọ bụ ebubo maka ịkọwapụta. N'ihi ya, a kwudịrị na onye nọ n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ndị na-ege ntị nwere ike ịgbagha ụdị mmụọ ụwa ọzọ.
Ọ bụ ezie na foto ahụ nwere ike ime ka ahụ onye na-ekiri ya ghara iru ala, o siri ike ịmata mgbe ọ na-egosi ihe karịrị ike mmadụ. Kedu ihe ị chere, ọ bụ nwanyị ahụ nwere ike paranormal na-adịghị ike ma ọ bụ na foto a ga-abụ ezigbo ọrụ Photoshop? N'anya ịnụ echiche gị banyere nke a na ngalaba nkọwa dị n'okpuru ebe a, ebe ọ bụ na etinyere ihe nkiri ahụ na-atụ ụjọ na channelụ YouTube nke TGB Cam na Eprel 2018. Ihe nkiri a malitere site na YouTube kwuru na ọ nụrụ mkpu na nso nso a site n'ọhịa dị nso n'ụlọ ya. - Ya mere, m nọ n'ime ụlọ mgbe m malitere ịnụ ya, yabụ echere m, 'know maara ihe,' gịnị kpatara na anaghị m eji igwefoto m apụta? ”Enwere onye nọ ebe ahụ ugbu a. (Yells) - Naanị ya na igwefoto, ọ kpebiri nyochaa mpaghara ahụ.
Ka ọ na-aga, mkpu ọzọ tiri ya na mberede. Ya mere, m dị ka. (mkpu) Chere. - The YouTuber wee chọpụta onye ọ dị ka ọ ga-aga n'ihu. - Chere, oh Chukwu m, enwere onye no ebe ahu, dude udi ihe ntughari na-adabere n’elu osisi na-egosi ka o noo.
Ọnụ ọgụgụ ahụ biliri wee bịakwute nwata ahụ. Ha na-eyi uwe ojii na uwe elu plaid na-egosi na ha nwere ụdị nkpuchi buru ibu nke na-ekpuchi isi ha. The YouTuber na-ajụ ajụ onye ahụ ma ọ bụrụ na ha bụ Onye ahụ wee dakwasị nwata ahụ, onye tụgharịrị ngwa ngwa laghachi na nchekwa nke ụlọ ya.
Mgbe ahụ, dịka nwatakịrị ahụ yiri ka ọ na-agbago n'ubi ya, ihe nkiri ahụ na-akwụsị n'ụzọ ihe omimi ma leruo ihe nkpuchi ahụ na-agba anya. Can ga-ahụ na ọ dị ka ụdị ụdị nwatakịrị ụjọ. Anya ya na-acha anụnụ anụnụ, nke dị warara yiri ka ọ na-ekpughe ebumnuche ọjọọ ha ka ọnụ ọgụgụ ahụ na-aga n'ihu.
Obere ihe omuma banyere ihe ederede a ma nke ahu n’eme ka egwu ya kari. Ọ bụ ezie na ọ ga - ekwe omume na eserese ahụ bụ ụdị ụdị ọkwa dị egwu, TTuber doro anya na ọ nwere ezigbo ụjọ. Ì chere na nwatakịrị nwoke ahụ zutere onye chọrọ imerụ ya ahụ? , ka ọ bụ naanị ihe ọchị? Kedu ụzọ ọ bụla, isiokwu a kwesịrị ka anyị nwee ntụpọ na ndepụta anyị nke ndị na-atụ ụjọ na-ese na ndụ dị n'okporo ụzọ, dị nnọọ ka ịpị bọtịnụ ịdenye aha ma pịa akara ngosi mgbịrịgba ahụ.
N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-anọrịrị oge niile na ihe ọhụrụ anyị na-atụ ụjọ ma na-atụ ụjọ - Ndị niile ziri ezi ka m wee mee ya - A na-ebugo ihe nkiri a na-adịghị mma na channelụ JOEROBTV YouTube na Septemba 2017. Edemede ahụ malitere na Onye na-ese foto igwefoto na-ekwu na ọ dịla anya ọ hụrụ onye zoro ezo n'okpuru akara aka na okporo ụzọ gbara ọchịchịrị. - Otu onye na - aga ije a, o lere anya n'ezie, n’ezie sketchy - Mgbe achotaghi ya onu ogugu di n’ime ochichiri nke ugbo ala ka ha mee ka ocha dozie - Buru nke mere na i nweko oriọna - Ma nwee ike ịmata onye ahụ, ọ kpebiri iji nwayọọ laghachi azụ na ntụziaka ọ ka si.
O doro anya na ihe na-aga n’ime ọhịa n’okporo ụzọ. - Lee, ọ na-eguzo n’ebe ahụ n’elu ọta. Amaghị m ma ị nwere ike ịhụ nke ahụ.
Ọ bụ n'ezie. - Mgbe onye na-ejide igwefoto na-abịaru nso, ọ ga-edo anya na ọnụ ọgụgụ ahụ apụtaghị na ọ nwere ihu nkịtị. O yiri ka ihe nkpuchi dị iche iche kpuchiri ya nke mebiri atụmatụ ndị na-adịghị ndụ.
Onye nwere igwefoto nwere obi ike na-abịarute nso na nwoke ahụ masks. Onu ogugu a jiri nwayọ na-adaru ala ụgbọ ala ahụ, mgbe ahụ, dịka ụgbọ ala na-agabiga, ọ na-ada n'ihu. Nwere ike ịnụ ka onye ọkwọ ụgbọ ala na-eti oke mkpu ma eserese ahụ na-akwụsị na mberede. - Oh ihe hell? - Whonye ka ihe omimi a di? Ikekwe nwatakịrị nwoke dị afọ iri na ụma ka ọ na-atụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ụjọ, ka ha na-eche n'akụkụ okporo ụzọ maka nnukwu ihe kpatara ya? Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka akụkọ egwu karịa, echegbula onwe gị, anyị kpuchiela gị.
Lelee njikọ abụọ a wee hapụ anyị nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụ gafee mkpịsị aka gị n'ihi na ọ na-egosi anyị na ị masịrị ọdịnaya ahụ na ọ bụ maka m, lee gị niile oge ọzọ. (iku ume) (na-eitatingomi igba egbe) (egwu piano)
Onye gụrụ Mooch ka ọ gbawara?
Ihe nkirifilmedn'ime na gburugburu Bloomington, Indiana, dịfilmedn'oge ọkọchị nke afọ 1978. Ọtụtụ n'ime ihe nkiri dị na fim ahụ bụfilmedna Mahadum Indiana; ihe nlele nke Indiana Memorial Union dị na ndabere nke njem Dave site na kampos.
Nabata na 'Ngwụcha ngwụcha', MSTEPHEN COLBERT. (were obi ekele) >> Stephen: I meela, daalụ, Achọrọ m ịhụnanya a na ume n'ihi na m na-abịakwute unu taa. (ULỌ NT)) N'IHI NA MGBE A, M SITE N'THISLỌ NCHE A: >> OOlọ akwụkwọ ahụ apụla. >> Anyịnya SCARAMUCCI, MGBE Naanị otu izu gara ije ma gbanwee ọrụ ahụ! >> OOLỌ AKW ISKWỌ B TO TOAS! >> STEPHEN: EE, AKWOOKWỌ AKW TOKWỌ TOAST, IHUJUO STBABR HAS AKWOKWỌ NA AKA. (LAUGHTER) Ọ KW HER HE Ọ GA-EZU IHE NILE KWES ANDR AND KWES ANDR AND KWES SHR HE HEBIP. (ULỌ) Nke ahụ dị ezigbo mma! E WERE AKW MKWỌ AH ONL Naanị ụbọchị iri ka ndị isi nkwukọrịta. (LAUGHING) EE, ENBỌDEN iri! Nke a abụghị nnọọ oge zuru ezu ịkwụ ụgwọ. (ULỌ) NZỌ NA-ACH CAN P PARTR CAN CANLỌ P CANR CAN SB SRER IHE ỌR R KWES OFR OF N'CALỌ AKW CAKWỌ Gị Mee ihe ị maara na ndị agadi, na nke ọhụrụ, pụọ na nke ọhụrụ! 'Ọchịchị chọrọ ka ọ gbanwee ya na onye ọ bụla ga-ewe ogologo oge, ya mere ha nwere mkparịta ụka ọhụụ nke ụlọ ọrụ taa DIRECTOREMMANUEL FRUIT NA-ekwuputala CNN NA NT BKWU ND M. >> Jon: KPỌPIGHTR L AKW .REF ekpe. >> Nke atọ n'ime ala Stephen: NA m na-enyo enyo na m, Dị ka, ọ na-apụghị ịbụ ihe ọ na-ekwu (na-atọ ọchị) OT IT na-emepe emepe.
NA Fraịdee, MGBE AHIRR NEW HỌR NEW ỌH OFR WH HLỌ BLỌ NA-ECHI NA nnukwu PAWHO, General JOHN KELLY, GENERAL JOHN KELLY. (ULỌ) NA-EBUGH S UMBỌRUM UMBỌREN AHEN. Dabere na otu isi, ndị nwere nnukwu ego, ego na ịgba alụkwaghịm nwere ike ịkacha - ndị agha. “EE, Ọ H LR PEOPLE ND PEOPLE NA-AKU NA AKWRAKWỌ.
Ya mere, Ọ bụrụ na KELLY NA-adịghị arụ ọrụ, na-ekele anyị OZI OZI, Mee ka. (NTU) NA-AD VRERY Ike. IKE IKE.
O doro anya na, KELLY na-anọchi anya onye ọrụ ọrụ REINCEPRIEBUS gosipụtara n’ebe a ka ọ hụ ya na-abịa. (LAUGHING) KELLY'S POLAR VS REINCE PRIEBUS.KILLY'S MILITARY.PIEBUS B A ONYE NS WRASH WASHINGTON.KELLY SI SITE BOSTON, PRIEBUS SITE WISCONSIN. (LAUGH) NA MGBE WHLỌ ITLỌ NA-acha ọcha, KA KA Ọ KWES MROO OOLỌ AKWECKWỌ AHECREC N'MLỌ N'STLỌR, n'ihi na ọ chọrọ 'ỌZỌ ỌZỌ, EGO' Egwuregwu nke ocheeze '. (LAUGHING) (AUDIENCE REACTION) >> Jon: EGO. >> Stephen: Nke ahụ abụghị ezigbo ntụnyere.
IHE 'Egwuregwu nke ocheeze' I kwesiri ichere izu dum maka alụmdi na nwunye ọhụụ. (Ikele na ịkụ aka) (PIANO RIFF) UGBUA 'Egwuregwu nke ocheeze'! KWESRC KWES EXROU N'SELỌ ỌH NEWR NEW ỌH ATR AT - NA 8.30 AM Mtụtụ a, a tụgharịrị na enweghi ọgba aghara na ụlọ ọcha! (ULỌ) NA NTN, OGOCHI isii, MERE, SCARAMUCCI P OR..
O doro anya na, 'Ọ B CHGHA ỌR' 'Adịghị etu ọnụ, ma na-eme mkpesa, SARAH HUCKABEE SANDERS NA-ekwu Okwu Maka Ọtụtụ ndị America. >> G HAN WHAT NA-EME?! (LAUGHING) >> Stephen: NA-AD GO ỌMA, DOO ỌMARA. (Aersụ andụ na ịkụ aka) (Ọchị) (PIANO RIFF) Achọrọ m ịme Nice.SARAH, AMAGH WHO M ONYE ND MA NA-EME NA NDIR HAIR, KWESUTRUT KWES THER GU NDSE A. (Ọchị) >> Jon: Chere! >> STEPHEN: AJ FE M NA-AJ THE M AHOO N'THELỌ AKWOOKWỌ A B B N'ECLỌ NKE A JOB BOB Ihe ọ bụla.
OZI NA-EMETI NA Nwunye Ya Wetara Alụkwaghịm Ma Na-eleghara'SB SONR SON NWA YA N’ỌNWA MADRE TRERRE IME KA ỌRA KWURU. (AUDIENCE RESPONSES) 'OY,, GYN SH M GA-EME M N ’AM IAKA Agaghị m abụ di' 'ga-akwụ m ụgwọ maka ndị ọzọ
Kwụsị m nwere oku ọzọ. Obu Onye isi ala. Ọ chọrọ ka m nwere ike ịme nkwalite OOCH - (LAUGH) (PIANO RIFF) NA Ọ B B ỌRIC IREC, N'IHI NA A NA-EME IHE NILE BANYERE SCARAMUCCI, ND ALL ỌH OFR OF OFLỌ THELỌ WHLỌ ITLỌ AHIT GA-ere: 'WAN chọrọ ire ebe a? 'JIMMY, ANY HAVE nwere mgbatị nke oghere Penina? EE, EBERE. (were a andụ na aka) EE. (PIANO RIFF) MM-HMM.
M KWURU, NA-EBU ASBỌ D, KA Ọ B,, D HAR KA Ọ D AS KA Ọ B ON NA SCARAMUCCI, Ọ KWURU M. AKW CKWỌ AKWOLKWỌ. (LAUGHING) B HAVE M Nnukwu Onye Nkụzi nke THEMOOCH IHE N’izu ụka. (LAUGH) MA echere m na oge eruola ka m chọpụta ihe niile m na-eche - MY 'MOOCH- end. (LAUGH) AKW MKWỌ MOOCH.
NA MY N'AKA StabbIN 'mma, Naanị n'ihu! (LAUGH) (PIANO RIFF) Enwere m ụdị atụmatụ ahụ! Nke ahụ bụ kpam kpam EZIOKWU - ANY L n'ụzọ nkịtị na-emecha ngwa ngwa. >> HEY, M ANTHONY SCARAMUCCI! AKWOOKWỌ ỌH NEWR IN ỌH INR IN N'INLỌ N'TOLỌ! >> STEPHEN: pụọ. >> Stefan: Ma ọ bụ oge na-ekwu ezigbo.
ANTHONY SCARAMUCCI, ANYI KWURU CHI. (LAUGHING) (APPLAUSE) (cheering) (PIANO RIFF) Nke ahụ bụ, ọ gwụla, ọ bụ FIRST.MET SCARAMUCCI, anyị na-egwu egwuregwu nke akụkụ nke 'BOHEMIAN RHAPSODY'. >> ♪ SCARAMOUCHE! SCARAMOUCHE! YOU chọrọ ime FANDANGO! >> STEPHEN: UGBU A ANY WILL GA-EME NKE ỌJỌ. (LAUGHING) (cheering) OM MOM
M Kwụsị. SỌPTA NA TOLỌ ọcha. ♪ EFỌD N OWFỌD SA KWURU M DI M. Mama m
ỌR MY M amalitela naanị. UGBU A M tụwara ya ma tụfuo ya niile
MOOOOOOCH. Agaghachi m ile. ♪ N’oge a, echi, gaa n’ihu, n’enweghị Tdị Ochie ♪ ♪ (aersụrị na ịkụrụ aka) >> Stephen: ỌMA, ỌMA! (PIANO RIFF) Ekele dịrị gị, JON. Malite >> Jon: HEY! >> Stivin: Ọ dịghị ihe atụ! (LAUGHTER) Izu uka gara aga, North koria gbara oso abuo nke abuo ogologo oge ule di na izu uka ano.
Nke a bụ egwu jọgburu onwe ya. MA EMEBUGHOD, TAA Onye isi ala nwere okwu sitere na ahihia. >> Ihe Mere North North Korea. Ga-enwe ike ijikwa ya.
Ọ ga - A GA-ere ahịa. Anyị na-ejikwa ihe niile. (LAUGH) (Gbasaa) REACTION >> Stephen: ANYRE NA-EKWU. (APPLAUSE) NORTH KOREA MALIDE MISSILEON FRIDAY NA TRUMP JUMP IN ACTION 24 HOURS RETENDER NA NKE A NA-EME NTANWU NWA. 'Enwere m ike ịgbanwe na CHINA.
NTUR O ANY ST ANYU NA-AKA NA NT THEPASTRAST NDAST MERE EME KWURU KWES YOUR YOU TOBU AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKW YEKWỌ AKW YEKWỌ AKW YEKWỌ AH YE Anyi agaghi ahapu ihe a.
CHINA nwere ike idozi nsogbu a! 'OH, EE, R ,ỌRỌ Mba ọzọ dozie nsogbu gị ISCLASSIC LEADERSH NKE ABRAHAM LINCOLN' THATLỌ A GA-EWEP A NA-Agaghị Eke. GN WILL KA CANADA GA-EME OKWU 'Ma a ọhụrụ Rock nwere' ókè iti CHICAGO. 'MA M BIRI CHICAGO MGBE M KWURU M KWES TOR CH KWES CHR CH CHICAGOAN GA-atụ egwu na nke ahụ. (LAUGH) (PROBST NA APPLAUSE) ANY HAVE nwere nnukwu ihe dịka gị taa, nwoke kachasị nwee mmekọahụ n'ụwa, MATTHEW MCCONAUGHEY, BAN H!
Kedu ihe Dave na-eche banyere ihe niile Italiantali nwere metụtara isiokwu nke ihe nkiri a?
Dị ka Jackie Earle Haley,, na-ele anya mgbe niile mgbe ọ na-ahapụ ụlọ.22.11.2019
Oo chimoo. (mkpu abụọ) (egwu dị egwu, egwu na-ada ụda) - Ndewo! - Hi - Whonye ka ị bụ? - Audrey - Aha m bụ Austin - you bu ezigbo enyi? - Ee, ma anyi bu ndi be anyi - gini? Kedu ihe bụ nke a? - Nke ahụ pụtara na anyị ahụla mbụ ma bụrụ ezigbo enyi? Echere m - Nnabata na Nkịta Ugboro Abụọ Na-ama Gị. Taa a ga - agba gị ume inweta ihe nrite - Amaara m.
Anyị kwere nkwa na anyị agaghị eme nnukwu ihe. - Ee (na-achị ọchị) - Ọ dị mma ụmụ okorobịa, na-enyenụ ibe unu obi ike - a na m ama ụnụ aka ka unu rie ude flawa flawa. (moans) - Achọrọ m inine na lollipops - ị bụ? dị ka ihe nkiri carnival? - Ọ bụghị n’ezie - a na m ama gị aka ịgba ịnyịnya igwe na-agba agba ruo mgbe ị ga - arịa ọrịa - agaghị m eme nke ahụ! - A na m agba gị aka ka ị gaa oke mmiri ozuzo, biri ebe ahụ ụbọchị iri na-anwụghị anwụ - a na m ama gị ka ị rie boogers gị- Ana m agba gị aka ka ị gbagoo mgbidi na-arịgo mgbidi wee wụkwasị na trampoline. ebe a juputara na ududo. - M na-ama gi aka iwere oji-eri ice cream. (moans) (ọchị)) - M na-agba gị aka ịracha akpụkpọ ụkwụ gị - Ee! Ndị a bụ akpụkpọ ụkwụ m na-eyitụbeghị! Lee ebe ahụ ebe ahụ! - Ọ dị mma ụmụ okorobịa, anyị nwere ọtụtụ ihe egwu.
Ugbu a, ka anyị weta generator generator. - The random nọmba generator? (Oti mgbịrịgba) - Ozugbo ịpịrị bọtịnụ a, ọ ga-ahọrọ usoro abụọ gị. - Ọ dị mma. - Atọ, abụọ --- Oh, ị chọkwara ịmara ihe ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị daa ama? - Chere, ọ bụrụ na ị na-amaja? - Ee, ị jụtụbeghị ọnụ ahịa ya.
Yabụ, ọ bụrụ na ị nwaa anwa anwa, ị nwere ike ịlele TV ụbọchị niile. (Lachị ọchị na ihu ọchị) Ndị mụrụ gị kwadoro - (na-eti mkpu) Ee! - Ee! - Kwe m nkwa na ị ga-eme ya. (ọchị) - Ndo, obere mkpịsị aka m bụ mkpịsị aka kachasị ike na aka m. - Atọ abụọ na otu. - Ee! - Ọ bụ ezie na ị na-eri nri aịlị liquorice ice cream - Yay! Ahụrụ m ice cream n'anya mmanya ojii.
Ma obughi mmanya ojii.- Ọ bụrụ na otu onye n'ime gị ejula afọ, ị gaghị enweta ihe nrite gị. - M na-arịọ gị ka ị buru ihe ịma aka ahụ.
Enwere m obi nkoropụ maka gị! - Anyị nwere ike ime ya meghee? - Mba Ọ dị mma, meghee anya gị. Oh chim i kwuru eziokwu - chi m! (mkpu) - Oh Chukwu m! - ud nwetụla ihe dị ka nke a, Audrey? - Mba, enweghị m mmasị n’ihe eji egwuri egwu egwuri egwu - I chere na ị nwere ike ‘itu elu? - Ee - Anyi aghacha imecha ice cream? - Ee, ị ga-akwadebe ihe niile. (Moans) - Anyị nwere ike ira ihe? Ugbu a? Ọ na-adịtụ ụtọ ka ose.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụghị imetosi. - Nke ahụ ọ na-eche nchebe? - Uh huh. - Echere m na unu dị mma. - Anyị na-n'ezie, n'ezie na-ejide. - Ka anyi mee nke a! Adịla m njikere! - Ọ dị mma, anyị ga-eme nke a oge 100, ọ dị mma? - Mba! (egwu na-atọ ụtọ) (na-asụ ude) (ọchị) - Ọ dị mma, gbalịa iri ya! Ka anyi bido itughari - Chi m! Oo chimoo! (mkpu) A na-ejide gị maka mmejọ ụmụaka! (groans na ntamu) - Hey, anyị na-agbakwunye mgbọ ọzọ, ụmụ okorobịa.
Anyị ebughị ya elu. - Ọ dị mma mgbe ọ bụla ị dị njikere. Mee ya! - Oh chi m, ah! Oh chukwu emela mkpu! (iti mkpu) - Nke ahụ dị mma, mana ọ bụghị nnukwu. - Austin, nọdụ ala. - Ọ dị mma, m ga-adabere azụ. - (na-ebe ákwá) Aga m atụfu. - Ọ dị mma, ị nọ ọkara ọkara ebe ahụ. - I nwere ike ime ya, Audrey! Echegbula, chi m - ị nwere ike ime ya karịa m, Austin, aka m bụ oyi oyi! - ị chọrọkwu ntụgharị - chi m! - Adịghị m njikere maka ya - enweghị m ike! Enweghị m ike! Ana m agbalị iri ihe niile.
Oh Chukwu m, ana m arịa ọrịa. Ọ DỊ MMA! My cone na-agbaji! Oh mba o ga-ada! Oh mba! - Ọ dị mma, ị ka nwere 30 ịga - ị ga-akwụsị! - Ee e, ị chọrọ ntụgharị ọzọ. (Egwu na-atọ ụtọ) (mkpu) - Oh chim! - Na m ga-atụfu! (Mkpu) (egwu na-atọ ụtọ karịa) - Ọ dị mma. (Coughs) - M gbụsara ọnụ mmiri - Ọ dị mma, ụmụ nwoke mepee eriri oche gị, gaa n'ihu ma pụọ. (Aka) Ezigbo ọrụ unu! (Glockenspiel) I mere ya! , Enwere m afọ mgbu - you ga - eme nke ahụ ọzọ? - Ee, m kpọrọ ya asị! Akpọrọ m ya asị! (egwu na-akpali akpali) (TV ụda mkpọtụ) - Ya mere ọ bara uru.
Egwuregwu ndị dị a inaa na-ekere òkè dị ukwuu n'ịgbasa?
Iche Dave n'ihe niile Italianna-egosipụta eziokwu ahụ bụ na n'oge uto ị bụdịịhọrọ onye ị chọrọ ịbụ na ụwa niilebuoghe nye gi; ọ bụkwa nnupụisi megide ndụ mkpagide na nke enweghị isi nke nne na nna ya.
Maka onye na-agba oso, mbido nke ọma nwere ike ịpụta ihe dị iche na aha ebighi-ebi na nchefu ebighi ebi. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na nnukwu akụkụ nke ọzụzụ nke onye na-agba ọsọ na-eche ihu ịpụ na mkpọchi ahụ ozugbo enwere ike. Ala decathlon siri ike na akụkọ ihe mere eme.
Onye na-agbachitere Daley Thompson laghachiri, ụmụ okorobịa abụọ East East, Christian Schenk na Torsten Voss, chọrọ imere onwe ha aha na nnukwu ọkwa. Otu nwoke chọrọ nnọọ ka e nwee nnukwu echiche bụ West German Jürgen Hingsen. Ọ bụ onye na - ejide ihe ndekọ ụwa, mana ọ nwetara ọlaọcha naanị na 1984.
N’afọ 1988, ọ gbara afọ iri atọ, n’afọ ndụ ya, wee dịkwa njikere iburu ọla edo ahụ gafere ya na Los Angeles. Ihe omume mbụ bụ 100m, ọ bụghị ọzụzụ kachasị amasị Hingsen. Ọ ga-achọ mmalite dị mma.
O doro anya na ọ dị njikere na ya. Ọ bụ Hingsen ọzọ. Ndị na-agba ọsọ agba agba nwere mmalite abụọ ka ọ ka nọ n'ọsọ ahụ.
Ogologo oge ọ naghị
Oh N'agbanyeghị na aka ya dị ọcha, mkpọsa Hingsen agwụla tupu ọ malite. Ọrụ Olimpik ya agwụchaala. Ọ gaghị alaghachi na egwuregwu.
Mana Hingsen abụghị onye na - agba ọsọ oge niile, yabụ na ọ ga - agbaghara mbido ya iji mezuo mbido ha, ọkachasị iji zere ọnọdụ dịka nke Hingsen chọtara. Linford Christie bịarutere Atlanta dị ka onye mmeri na - agbachitere 100m. O meriri nrite ọla edo ya na Barcelona mgbe ọ dị obere afọ 32, yabụ Atlanta ga-abụ egwuregwu Olympic ikpeazụ ya na 36.
Nabata na emume mmeghe nke Egwuregwu
Christie agbaghaala afọ ya iji mee ya na njedebe na Iji merie agba nke abụọ ya n'ihu onye mmeri ụwa Donovan Bailey si Canada. Ahịrị maka nke ikpeazụ bụ nke na-esote Bailey enwere ọnụọgụgụ n'ụwa, Frankie Fredericks, bụ onye mechara Christie maka ọlaọcha na 1992, onye America Dennis Mitchell, onye were ọla nchara n'otu agbụrụ ahụ, Ato Bolden, onye kachasị elu. nọ na njide, onye bụ ọdụdụ nwa 100m dallist na World Cup akụkọ ihe mere eme n'afọ gara aga.. na Mike Marsh, onye meriri ọla edo karịrị 200m na ​​Barcelona.
Ọ bụ mpaghara klaasị dị elu. Enweghị ohere maka njehie. Christie maara na ya ga-agba ọsọ zuru oke iji debe aha ya.
Raregha ugha siri na Christie malite. Ọ bụ ama ama mbido na maara na ọ ga-enweghị ntụpọ taa. Ọ nwaleela ọdịmma ya.
Otu n'ime ha na ọrụ ya na egwuregwu Olympic ga-agwụ. Nịm
Mbido ụgha ọzọ. Oge a ka ọ bụ ụta Bolden. Esemokwu ahụ malitere.
Nke atọ? Christie nwere mgbagwoju anya, mana nkwughachi ahụ yiri ka ọ ga-egosi na ikpe mara ya. Ichebe aha ya gafere n'ọnọdụ ndị na-agbawa obi. Ma ọ bụ? Christie wepụrụ ọkọlọtọ nke abụọ na pad ya.
Ọ jụrụ ịnara mkpebi ahụ. Ọ bụ omume dị ịrịba ama nke agadi nwoke nke ịgba ọsọ. A gwara ya ka ọ hapụ ebe ahụ, mgbe ọ kwụsịchara ịgba ọsọ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji atọ, ọ laghachiri n'azụ egwuregwu ahụ.
Ọ na-ele anya na-enweghị enyemaka ka ọ funahụ Donovan Bailey okpueze ya na njedebe dị egwu nke ọrụ mba ụwa nke otu n'ime ndị na-agba ọsọ kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme. Ma ọ dịkarịa ala Christie mere ka ọ banye na egwu ahụ, nke ụfọdụ nwere ike karịa karịa ikwu. N’ụzọ Egwuregwu Olimpik na 1972, Rey Robinson na Eddie Hart bụ abụọ n’ime atụmanya kachasị ekpo ọkụ n’ịgba egwuregwu.
Ha bụ ndị jikọtara aka na ndekọ ụwa. Ha abụọ nwere akara mmeri nke mmeri na 100m. Mgbe ụmụaka abụọ na-agba ọsọ na-ada nke ha n'ụtụtụ Nwee ike izizi mbụ, ha laghachiri na Obodo Olimpik iji zuru ike.
Onye na-enye ya ọzụzụ bụ Stan Wright lekọtara usoro iheomume ya. Ọ gwara ha na agba mbido ha n’agba nke abụọ ga-amalite n’elekere isii nke ụtụtụ. na mbido.
Na 4:15 pm. Robinson na Hart zutere n'obodo ndị na-eme egwuregwu wee gbanye televishọn.
Ha hụrụ otu narị mita mmadụ gbara ọsọ. Ọ bụ agba nke abụọ. Foto ndị ahụ dị ndụ.
Mgbagwoju anya malitere. Mgbe ahụ, ụjọ. Ha gbagara n’ámá egwuregwu ahụ.
Ma oge agaala. Hart na Robinson agbaghị ọsọ ha ma bụrụ ndị enwetaghị. Onye na-enye ọzụzụ bụ Stan Wright nọ na-arụ ọrụ na usoro ezighi ezi.
Maka ụmụ okorobịa abụọ na-agba ọsọ ndụ, ọrụ ndụ ha gbajiri n'ihu ha. Ọ na-agbawa obi. ọla edo mechara merie Valeriy Borzov si USSR na oge nke 10.14 sekọnd.
Robinson na Hart gbara ọsọ 9.95 sekọnd tupu afọ a. Ma Robinson ma ọ bụ Hart agaghị enwe mmeri nrite Olympic na asọmpi mmadụ. A kpochapụrụ ihe ọghọm nke ndụ n'oge ọnọdụ na-agbawa obi.
Yabụ n'oge ọzọ ị gafere elekere mkpuchi gị wee nwee mmụọ ahụ jọgburu onwe ya n'ime olulu nke afọ gị, gbalịa iche n'echiche mmetụta Rey Robinson na Eddie Hart nwere mgbe ha tụgharịrị na TV.
Kedu igwe kwụ otu ebe nọ na-apụ apụ?
N'ihe banyere usoro ihe omume a, enyere iwu na mmiri 1978 maka Masi Gran Criterium abụọigweka ewe nye gi ihe onyonyoAkinghapụ wayhapụ. Isi ọkpọ na-egosi ihe nrịba ojii ahụ nke mere ka ọdịiche dị na nke Christopherigwe kwụ otu ebesite na Masi nke abụọ ejiri mee ihe nkiri.Ọkt 31 2017
Ndi na-agbaga si filmed na Bloomington?
Na a $ 2.4 nde mmefu ego, naihe nkiribụgbara nakampos na naBloomingtonn'oge ọkọchị na udu mmiri nke 1978. Ebe a na-ahụ ihe nkiri bụgbaana oghere a na-enwe ike ịmata, dị ka commons na Indiana Memorial Union, square na ogbe ndịdaBloomingtonna Rose Well House na klas nke Old Crescent.Eprel 1 2019
Kedu mgbe esere ihe nkiri ahụ bụ Breaking Away?
Ọ bụ Blase kpaliri mmasị Stoller n'ihe niile nke ndị Italiantali, onye nọrọ otu ọkara afọ ya na ndị dọkịta abụọ Italiantali na-arụ ọrụ na ụlọ ọgwụ ahụ. Na a $ 2.4 nde mmefu ego, naihe nkiribụgbaana kampos na Bloomington n'oge ọkọchị na ọdịda nke 1978.Eprel 1 2019
Nye bụ onye nduzi nke ihe nkiri ahụ Breaking Away?
Gaa na nchọgharị ima elu Chọọ. 1979 ihe nkiri American site n'aka Peter Yates. Akinghapụ Away bụ 1979 ọbịbịa America nke afọ ihe nkiri-ihe nkiri nkiri nke Peter Yates duziri ma duzie ya bụ Steve Tesich. Ọ gbasoro otu ụmụ nwoke dị afọ iri na ụma nọ na Bloomington, Indiana, ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji n'oge na-adịbeghị anya.
Kedu ndị bụ isi sekpụ ntị n'ịkpapụ?
Maka ojiji ndị ọzọ, lee Breaking Away (disambiguation). Akinghapụ Away bụ 1979 ọbịbịa America nke afọ ihe nkiri-ihe nkiri nkiri nke Peter Yates duziri ma duzie ya bụ Steve Tesich. Ọ gbasoro otu ụmụ nwoke dị afọ iri na ụma nọ na Bloomington, Indiana, ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji n'oge na-adịbeghị anya.
Gịnị bụ ihe nkiri na-agbasa banyere Peter Yates?
Ọ bụ egwuregwu dị egwu banyere igwe kwụ otu ebe na itolite. Peter Yates 'akinghapụ Ase' bụ foto dị nro, na-amalite nwayọ wee wee ghọọ ifuru mara mma. Ọ bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto na-eme ka ndị na-eme ihe nkiri na-akwa ụda site na ntị na ntị. Amaghị m otú otu ihe nkiri si dị mma.